निर्मला हत्याकाण्डको दुई महिनाः खै कहाँ गयो प्रहरीकाे अनुसन्धान? यस्तो छ दुई महिनाको ‘घटनाक्रम’ – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्मला हत्याकाण्डको दुई महिनाः खै कहाँ गयो प्रहरीकाे अनुसन्धान? यस्तो छ दुई महिनाको ‘घटनाक्रम’
महेन्द्रनगर | ८ असोज ,कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको दुई महिना पुरा भएको छ । आज भन्दा ठिक दुई महिना अगाडी, गत साउन १० गते साथीको घरमा होमवर्क गर्न गएकी उनको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
साउन ११ गते निर्मलाको शव घर नजिकैको उखुबारीमा फेला परेको थियो । घटनाको भएको दुई महिना भइसक्दा पनि दोषी पहिचान हुन सकेको छैन । साउन ११ देखि नै अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म घटनामा संलग्न अपराधीबारे कुनै ठोस प्रमाण जुटाउन सकेको छैन । अनुसन्धान प्रगती शुन्य जस्तै छ ।
‘अझैसम्म खासै ठोस प्रमाण फेला पर्न सकेन,’ कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख कुवेर कडायतले भने, ‘गहन ढंगले अनुसन्धान भइरहेको छ तर अपराधी को हुन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।’ उनले अनुसन्धानमा संलग्न टोलीले घटनाबारे विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने सूचनालाई पछ्याउँदै सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरिरहेको दाबी गरे ।
अनुसन्धानमा कञ्चनपुर प्रहरीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले बनाएको अनुसन्धान टोलि पनि सघाइरहेको छ । गत भदौँ ३१ गते नेपाल प्रहरीले घटनाको विषयमा छानविन गर्न डीआइजी धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा समिति पुनगर्ठन गरि फेरी अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुरमा रहेको छ । तर उसले पनि अहिलेसम्म ठोस प्रमाण पनि जुटाउन नसकेको हो । प्रहरीले हत्याराको कुनै सुइको पाउन सकेको छैन ।
घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको गल्तीका कारण अनुसन्धान झन्झटिलो बनेको प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ । निर्मला हत्याकाण्डमा प्रहरी प्रशासन निकै आलोचित भयो । नेपालको उच्च अनुसन्धान छवि बनाएको सिआईबी पनि घटनाको प्रमाण लुकाउन खोजेको आरोपमा तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख (निलम्बित) एसपी डिल्ली राज बिष्ट संगै फस्यो । प्रहरी इतिहास मै पहिलो पटक सिआईबी पनि अनुसन्धानमा चुक्यो ।
यसले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा नै प्रश्न चिन्ह लगाएको छ । प्रहरीले नै प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने आरोप लागेसँगै प्रहरीले तत्कालिन एसपी डिल्लीराज बिष्ट, सिआईबीका डिएसपी अंगुर जिसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, दुई जना प्रहरी निरीक्षक र एक जना असईलाई निलम्बन गरेको थियो । निर्मलाका वास्तविक दोषि पहिचान हुन नसक्दा प्रहरीप्रतिको जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । छोरीले न्याय पाउने आशा मर्दै गएको निर्मलाका आमाबुवाको भनाई छ ।
स्थानिय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय कक्षा ९ मा पढ्ने निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना पछि उनको लागि न्याय माग्दै कञ्चनपुर सहित देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ । हत्याको बिरोधमा महेन्द्रनगरबाट शुरु भएको प्रदर्शन देशभरि नै फैलिएको हो । मुख्य अभियुक्त भनेर स्थानिय दिलिप सिँह बिष्टलाइ सार्वजनिक गरे पछि महेन्द्रनगरमा भइरहेको आन्दोलनले उग्ररुप लियो ।
त्यस क्रममा प्रहरीले कहिले अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो भने कहिले आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार भयो । प्रहरीले चलाएको गोली लागि दुई दर्जन आन्दोलनकारी घाइते भए । स्थानिय एक बालक शन्नी खुनाले भने ज्यान नै गुमाउनु प¥यो । घाईते मध्ये एक जनको राजधानिमा उपचार भइरहेको छ । हाल सम्म उनलाई होस आएको छैन् भने उनले एउटा खुट्टा समेत गुमाउनु परेको छ ।
घट्ना घटेको दुई महिनाको अवधीमा कञ्चनपुर लगायत देशैभरि बिभिन्न घटना भए ।
निर्मला हत्याकाण्डको घटनाक्रम
साउन १० — बिहान ११ बजे गृहकार्य गर्छु भनि साथी रोशनी बमको घर गइ हराएको — निर्मलाकी आमा दुर्गा देवी पन्तद्वारा प्रहरीमा छोरी हराएको जानकारी । – प्रहरीले अबरे राती भयो आज आउन नमिलने भन्दै भोली खोजौला भन्दै टारेको ।
साउन ११ गते — निर्मलाको शव भीमदत्त नगरपालिका घर नजिकैको उखुबारीमा भेटियो । स्थानिय द्वारा नगरप्रमुखले गैरजिम्मेवारी पन देखाएको भन्दै भीनपा कार्यालय र बजार बरिपरि प्रदर्शन र नाराबाजी ।
साउन १२ — हत्याको बिरोधमा महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन उग्र तथा लगातार वास्तविक हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै प्रदर्शन । प्रदर्शनका क्रममा धेरै पदर्शनकारी घाईते ।
साउन १४ — निर्मला पन्तको अन्त्यष्टि गर्न दवाव । – तत्कालीन प्रहरी प्रमुख विष्टले परिवारलाई शव नउठाए कफ्र्यू लगाउने चेतावनी । – सिमित मान्छे गएर निर्मला पन्तको महाकाली आर्यघाटमा अन्त्यष्टि – अन्त्यष्टि पछि मृतक पन्तका घर परिवार संग स्थानिय आक्रोशीत ।
साउन १५ देखि भदौं २ सम्म: – कञ्चनपुमा समान्य आन्दोलन भइरहदा प्रहरीले केहि व्यक्तीहरुलाई थुनामा लिई अपराध स्वीकार्न यातना । – यो बिचमा सीआईबी र तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुखले निलम्बित एसपी विष्टले वास्तविक अपराधीको खोजी नगरि कृतिम अपराधी सृजना गर्न हदै सम्मको प्रयास गरेको ।
भदौँ ४ गते — पत्रकार सम्मेलन गरि मनसिक सन्तुलन नभएका ४१ बर्षीय दिलिप सिंह विष्टलाई घटनाको मुख्य अभियुक्त भनि सार्वजनिक ।
भदौं ५ गते — प्रहरीले कृतिम अभियुक्त समर्वजनिक गरेर घटना ढाकछोपका प्रयास गर्न लागेको छनक स्थानियले पाए पछि आन्दोलन उग्र । — न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना ।
भदौँ ६ — नेपाल प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप हुँदा दुई दर्जन घाइते । — प्रहरीद्वारा सयौं सेल अश्रुग्यास प्रहार ।
भदौँ ७ — आन्दोलनका क्रममा दुई प्रहरी र ६ आन्दोलनकारी घाइते । प्रहरीद्धारा आन्दोलनकारीमाथि गोली र अश्रुग्यासको वर्षा — कारागार ब्यवस्थापन बिभागका महानिर्देशक हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन । — सिडियो कुमार खड्का र एसपी डिल्लीराज बिष्टलाई बिभागमा फिर्ता बोलाई उनिहरुको स्थानमा क्रमशः तीर्थ अधिकारी र कुवेर कडायत खटाइए । — आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पुर्णको खर्च सरकारले बेर्होने घोषणा ।
भदौँ ८ — गृहमन्त्रालयले बनाएको छानबीन टोली महेन्द्रनगर पुगी काम शुरु । — प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी कञ्चनपुरमा हाजिर । — आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागि सन्नी खुनाको मृत्यु । — महेन्द्रनगर आसपासका क्षेत्रमा कफ्र्यु लगाउन शुरु । — घाइते आन्दोलनकारीलाई भेट्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ।
भदौँ ९ — सोधपुछका लागि निर्मला की साथी रोशनी बम र उनकी दिदि बबितालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । — सन्नी खुनाको अन्त्यष्टि । — निर्मला पन्त र सन्नी खुनाको परिवारलाई राहतस्वरुप १०÷१० लाख दिने सरकारकोघोषणा । — प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घाइते भएका सुरेश प्रकाश चटौत र उमेश देउवालाई कोहलपुर रेफर । — न्यायका लागि काठमाडाँैमा प्रदर्शन । — एसपी डिल्लीराज बिष्ट निलम्वित । — डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी र प्रहरी उपरिक्षक एकेन्द्र खड्का प्रहरी मुख्यालयमा फिर्ता ।
भदौँ १० — बिहान १० बजेदेखि महेन्द्रनगरमा कफ्र्यु जारी ।
भदौँ ११ — बेलुका ६ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म फेरी कफ्र्यु जारी । — सम्पादकहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीको अपराधी पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता । — ‘निर्मलाका निम्ति न्याय’का लागि माइतीघरमा लाइभ कार्टुन र पेन्टिङ प्रदर्शनी ।
भदौँ १२ — डिएसपी कृष्णराज ओझाको नेतृत्व छानबिन समिति गठन । — महेन्द्रनगरमा पुनः आज राति ८ बजेदेखि भोली बिहान ४ बजे सम्मका लागि कर्फ्यु आदेस जारी । — दिलिपसिंह विस्टलाई स्वास्थ्य परिक्षणका लागि काठमाडाँै लगियो ।
भदौँ १३ — प्रहरीले चलाएको गोली लागि घाइतेहरुको उपचारमा ध्यान दिन सरकारसंग नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको आग्रह ।
भदौँ १५ — निर्मलाका सहपाठीद्धारा वास्तविक हतयाराको पहिचानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र । — खानेपानी मन्त्री बिना मगरद्धारा निर्मला र आन्दोलनका सहिद सन्नीका घर–परिवारसंग भेट ।
भदौँ २१ — प्रहरी महानिरीक्षक सवेन्द्र खनाल निर्मलाको घरमा । — अनुसन्धानमा व्यापक त्रुटी भएको मानव अधिकार आयोगको निष्कर्ष । — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल टेलिभिजनसंगको अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्मलाको शव पोष्टमार्टमपछि अन्तिम दाहसंस्कारका लागि आर्यघाट लैजाने क्रममा भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर सुरेन्द्र विष्टको घरको आँगनमा राखिएको, उच्चस्तरीय छानविन समितिलाई अनुसन्धानमा बाधा पुर्याएको लगायतका झुटो कुराहरु बोलेको भन्दै सर्वत्र बिरोध ।
भदौँ २२ — महानिरीक्षक खनालद्धारा घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीको कमजोरी भएको स्वीकार । भदौँ २४ — दिलिपसिंह विष्टलाई ४ दिन थुनामा राख्न म्याद थप । भदौँ २५ — हरिप्रसाल मैनाली नेतृत्वको उच्च स्तरिय छानविन टोलिका सदस्य बिरेन्द्रबहादुर के.सीले सुरक्षा थ्रेट देखाउदै समितिबाट राजिनामा ।
भदौँ २६ — दिलिप सिँह बिष्ट निर्दोष ठहरिएर छुटे र, — बम दिदि जमानतमा र बहिनि पनि साधारण तारिखमा छुटे ।
भदौँ २७ — निर्मलाका आमाबुबा न्यायको लागि काठमाडौँ गए । — उच्च स्तरिय छानबिन समितिबाट राजीनामा दिएका के.सी समिति मै फिर्ता । — झुटो’अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई कारवाहीको तयारी । — न्यायको माग गर्दै महेन्द्रनगरमा आमा समूह फेरि आन्दोलित, कालो साडी लगाएर कालो तीज ।
भदौँ २८ — निर्मलाका आमाबुबा र अधिकारकर्मीको पत्रकार सम्मेलन । — नेपाली काँग्रेसद्धारा वास्तविक हत्यारा पक्राउको माग गर्दै संसद बैठक अबरुद्ध । — निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसहित उनका छोरा किरण तथा भीमदत्त नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिज आयुष विष्टको डीएनए परिक्षण सुरु । — न्याय माग्दै थाली, चम्चा, मोटर साइकल, अटो र साइकलको हर्न बजाएर महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन ।
भदौँ २९ — सदनमा सांसदद्धारा सरकारको आलोचना । — निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको गृहमन्त्री थापाद्धारा सदनलाई जानकारी । — बाल दिवसको आयोजनामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीता जनाइ निर्मलाकी दिदिले उनको बारेमा वियोगान्त गीत गाइ , जुन सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भयो ।
भदौँ ३० —डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, अंगुर जिसी, प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट, एकेन्द्र खड्का,र प्रहरी सहायक निरीक्षक रमासिंह धामी निलम्वन । — निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै देशैभर प्रदर्शन । — नेवि संघद्धारा महेन्द्रनगरमा प्रदर्शन र कञ्चनपुर बन्द ।
भदौँ ३१ — डीआइजी धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा शक्तिशाली छानबिन समिति गठन,, — निर्मलाका लागि न्याय माग्दै झलारी,धनगढि सहित बैतडीमा पनि प्रर्दशन,, — झलारीमा देउडा खेल खेल्दै वास्तविक हत्यारा सार्वजनिकको माग,,
असोज १ — निर्मलाका आमाबुबाद्धारा प्रधानमन्त्रीसँग भेट । — हत्याराले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नपाउने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
असोज २ — पीडित तथा स्थानीयसँग समन्वय गरि अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रहरी मुख्यालयले एसपी दुर्गा सिंह (चन्द) लाई महेन्द्रनगर खटायो । — निर्मलाका आमाबुवा काठमाडाँैबाट कञ्चनपुर फिर्ता । — नेपाली काँग्रेस कञ्चनपुरद्धारा निर्मलाको हत्यारालाई छिटो कानुनी कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने मागका साथ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र । — निर्मलाको न्यायका लागि काँग्रेसद्धारा महेन्द्रनगरमा पार्टीको झण्डा सहित बिशाल ¥याली । —काँग्रेसले निकालेको बिशाल ¥यालीमा निर्मलाका बा–आमा पनि सहभागी ।
असोज ३ — संविधान दिवसका अवसरमा देशभर बिभिन्न कार्यक्रम गरिए तर कञ्चनपुरमा भने निर्मलाको न्यायको लागि बिभिन्न छलफल, सडक नाटक गरिए ।
असोज ७ — नेपाल महिला संघद्धारा कञ्चनपुर लगायत ७७ वटै जिल्लामा प्रदर्शन तथा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र ।
जगदिश गिरी, गोकुल जोशी/ सिधान्युजबाट साभार ।
मध्यरातमा अायो यस्तो दुःखद खबरः प्रेम प्रस्ताव नमानेको भन्दै ‘तेजाब’ आक्रमणमा परेकि बालिका सम्झना दासको मृत्यु
छत्र शाहीसँग हिलोमा कुस्ती खेलेर भाईरल अस्मिता मिडियामा, चर्को गाली खाएका छत्र बारे यस्तो भनिन् (भिडियो हेर्नुस)